Ngokugcwele imaski okuzenzakalelayo Production umugqa
imikhiqizo ezingaphezu kuka-18
Abangaphezu kwesigidi esingu-2
Ephathekayo Fibre Laser M ...
lakhiqiza kahle ephathekayo umshini Fibre laser wokugubha Izici 1. izinga High fibre generator, ukhwaliti enhle endaweni, optical amandla kwabantu iyunifomu, okukhipha esitebeleni amandla optical, uhlangana lo funa isicelo ezinkulu emakethe; 2. RayFa self-athuthukile digital ngesivinini galvanometer isithwebuli, isayizi esincane, high speed nokuzinza kakhulu; ukusebenza ufinyelela international level ethuthukile; 3. Inamandla uhlelo lokulawula, optimizes idatha ngokuvumelana nesicelo ahlukahlukene, izisekelo m ...
Ubuso bekhompyutha Fibre Laser ma ...
lakhiqiza kahle Desktop Fibre laser wokugubha umshini Izici 1. izinga High fibre generator, ukhwaliti enhle endaweni, optical amandla kwabantu iyunifomu, okukhipha esitebeleni amandla optical, uhlangana lo funa isicelo ezinkulu emakethe; 2. RayFa self-athuthukile digital ngesivinini galvanometer isithwebuli, isayizi esincane, high speed nokuzinza kakhulu; ukusebenza ufinyelela international level ethuthukile; 3. Inamandla uhlelo lokulawula, optimizes idatha ngokuvumelana nesicelo ahlukahlukene, kusekela mu ...
Ubuso bekhompyutha CO2 Laser uphawu ...
CO2 laser ukusika MACHINE
lakhiqiza kahle CO2 Laser umshini cut laser womqophi 1390 zibe yizinkuni MDF Laser ukusika umshini kwenza ukusebenzisa ngokugcwele ukulawula computer nokulawula zezinombolo isilawuli motion mechanical, ukuze ukuzisika akuwona eqondile kanye ukucutshungulwa umphumela kuyathuthuka izidingo zamakhasimende. Sikhonza amakhasimende ethu kuye ngezidingo zabo, ngakho sikhetha okungcono software design, isakhiwo mechanical, zikagesi futhi izingxenye Ukukhetha ukuze ugcine ukuzinza, ukunemba nejubane ku ekilasini lokuqala ...
Aphathwayo Fibre Laser w ...
Aphathwayo fibre laser Welding umshini l aphathwayo ...
Flying Fibre Laser Mar ...
lakhiqiza kahle flying laser Fibre wokugubha Machin ...
lakhiqiza kahle laser Desktop Fibre wokugubha machi ...
lakhiqiza kahle CO2 Laser umshini cut laser engra ...
Xintang Community, Houjie Idolobha Dongguan CITY, Guangdong Province, ECHINA